Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Sergio Ramos Oo Aqbalay Heshiis Hal Sano Ah, Arsenal Oo Ku Biirtay Loolanka Ben White Iyo Qodobo Kale
HomeSuuqa kala iibsigaWararka Suuqa kala iibsiga: Sergio Ramos oo Aqbalay Heshiis Hal sano ah, Arsenal oo ku biirtay loolanka Ben White iyo qodobo kale
June 10, 2021 Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Frank Lampard ayaa dib ugu soo laabtay loolanka loogu jiro shaqada Crystal Palace kadib markii uu burburay wada hadaladii Nuno Espirito Santo, sida ay qortay Mirror.
Ilkay Gundogan ayaa sugi doona inuu arko haddii Barcelona ay xoojiso xiisaheeda ka hor inta uusan go’aan ka gaarin mustaqbalkiisa Manchester City, sida ay qortay Sun.
Barcelona ayaa u dhaqaaqday saxiixa Lorenzo Pellegrini laakiin waxay tartan kala kulmeysaa Liverpool iyo Atalanta oo ku aadan saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Roma, sida laga soo xigtay Mundo Deportivo.
Arsenal ayaa soo gashay loolanka loogu jiro saxiixa daafaca Brighton Ben White, sida ay qortay Mirror.
Tottenham ayaa wadahadalo horumar leh kula jirta Borussia Monchengladbach si ay u hesho weeraryahan Marcus Thuram, sida laga soo xigtay RMC Sport.
Goolhaye Andre Onana ayaa wali u muuqda inuu ku biirayo Arsenal xagaagan marka uu dhamaado kiiskiisa racfaanka ee ku saabsan xadgudubka iyo dambiyada lagu heesto, sida ay qortay football.london .
Paris Saint-Germain ayaa sii wada dhibaatada ay ku heyso Barcelona, ​​waxaana ay haatan muujineysaa xiisaha ay u qabto garabka garabka ka ciyaara Ousmane Dembele iyadoo ay jiraan isku dayo gooni ah oo ay ku doonayaan inay ku afduubtaan heshiiska Georginio Wijnaldum, sida ay qortay Marca .
David De Gea ayaa rajeynaya inuu sii joogo Manchester United xagaaga inkasta oo si weyn loo hadal haayo inuu tagayo, The Sun ayaa qortay .
Tababarihii hore ee Chelsea ayaa badalaya Simone Inzaghi oo ay dhawaan shaqaaleysay kooxda Inter. goal
Roma ayaa diyaar u ah inay u dhaqaaqdo saxiixa weeraryahanka Torino Andrea Belotti ka dib markii tababaraha kooxda Jose Mourinho uu ogolaaday ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Italy inuu noqdo bartilmaameedka ugu sareeya ee suuqa kala iibsiga, Goal
Chelsea ayaa xiriir la samaysay kooxaha iyo wakiilada iyada oo diirada saareysa inay heshiis la gasho Borussia Dortmund Erling Haaland iyo daafaca buuxa ee Inter Achraf Hakimi. Goal
Sergio Ramos ayaa sameeyay go’an ku aadan mowqifkiisa qandaraaska cusub ee Real Madrid isagoo saxiixaya hal sano- sida laga soo xigtay Deportes Cuatro .
Real Madrid ayaa diyaar u ah inay iibiso daafaca dhexe ee lala xariirinayo Manchester United Rafael Varane aduun dhan 50 milyan euro ((43m / $ 61m) – sida laga soo xigtay Mundo Deportivo .
Nuno Espirito Santo ma noqon doono tababaraha xiga ee Crystal Palace ka dib markii kooxda ay diiday inay fuliso dalabkiisa, sida ay qortay Daily Mail.
Weeraryahanka Manchester City Gabriel Jesus ayaa ka soo muuqday raadiyaha suuqa kala iibsiga ee Juventus – sida laga soo xigtay Gazzetta Dello Sport .